IFA ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာ Motorola ကသူဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ အရွယ်အစားနှစ်မျိုးနှင့်အားကစားဗားရှင်းဖြစ်သော Moto 360 Sport အသစ် Moto 360
Sony က Xperia စမတ်ဖုန်းသုံးဆောင်ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးကင်မရာ autofocus၊ လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာနှင့်နှစ်ရက်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။
ASUS ZenWatch2အကြောင်းပြောရန်ဘာလင်ရှိ IFA နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဘာလင်ရှိ IFA 2015 ကိုစတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်သူများစွာက Archos မှ Archos Diamond Plus ကဲ့သို့သူတို့၏အသစ်အဆန်းများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။
Huawei မှ Mate S အသစ်ကဲ့သို့သတင်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Acer Predator 8 ဆိုသည့်တက်ဘလက်ကိုပြသခြင်းဖြင့် Acer ၏အလှည့်သည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
မည်သည့် Android ဖုန်းတွင်မဆို fingerprint sensor မပါရှိပါကမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
မည်သည့် Android တွင်မဆို Fingerprint Lock ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လျှောက်လွှာ
Meizu သည်နေ့တိုင်း Apple နှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်
Meizu သည်၎င်း၏ logo အသစ်နှင့်လာမည့်နှစ်များအတွင်းကုမ္ပဏီကိုယူမည့်မဟာဗျူဟာအသစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအက်ပဲလ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုများပြားလာသည်။
ယခု Instagram သည် Instagram မှတိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလုံးဝတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးစကားပြောဆိုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲပုံများကိုမျှဝေနိုင်သည်
Google သည်ရှာဖွေရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုလိုဂိုအသစ်နှင့်အဘယ် Google Now တွင်သာလွှမ်းမိုးထားသောအရောင်များကိုအဆင့်မြှင့်ထားသည်။
Google စတင်တည်ထောင်ချိန်ကစပြီးအများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည်။ ယခုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီသည်လိုဂိုအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Paypal.me သည်သင်ကိုယ်ပိုင်ငွေစာရင်းကိုလက်ခံရရှိသည့်အတွက်ငွေလွှဲပြောင်းရာတွင်လွယ်ကူစေမည့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန် Paypal ၀ န်ဆောင်မှုသစ်ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဤပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် Oneplus 2၊ နှစ်၏မျှော်မှန်းထားသည့်အကောင်းဆုံး android ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
[APK] Navigation interface အသစ်နှင့် Google Maps 9.14 တွင်သတင်းများ
ယနေ့တွင်သင့်အားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို Iradish X9 Y6 ၏စပိန်ဘာသာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ယူရို ၃၀ အောက်သာရနိုင်သည်။ Apple Watch ၏စစ်မှန်သောကိုယ်ပွားဖြစ်သည်။
Sony Xperia Z5 Premium သည် 4K ပါ ၀ င်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူကိုအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူ၏အသစ်ဖြည့်စွက်မှုဖြစ်သည်။
Cheetah Mobile သည် developer တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကြော်ငြာအမြောက်အများကို၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းများတွင်ပေါင်းထည့်ပြီးသန့်ရှင်းသော QuickPic ကိုဝယ်ယူလိုက်သည်။
BlackBerry ၏ပထမဆုံး Android စမတ်ဖုန်းတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချောချောမွေ့မွေ့ QWRTY keyboard ပါရှိသည်။
ဒါကလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာပါတဲ့ Elephone M2 ပါ
Elephone M2 သည်တရုတ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူများထံမှထိပ်တန်းအဆင့်မီတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Instagram ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်၍ ယခုသင်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရှုခင်းနှင့်ပုံတူပုံစံဖြင့်တင်ခွင့်ပြုသည်
အခု Twitter ကသင့်ရဲ့ Android နဲ့ iOS ဆီကနေသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်မှာ tweet တစ်ခုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ
Twitter သည် Android နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးတွင်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုတွစ်တာတစ်ခုတပ်ဆင်နိုင်မှုအသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏မျက်နှာပြင်ကိုဂူဂဲလ်က "အသွင်သစ်" ပေးသည်
ဂူဂဲလ်သည်ဂူဂဲလ်မှအက်ပ်များ (သို့မဟုတ်) ရှာဖွေဘားဝစ်ဂျက်မှရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
Doogee Valencia နှင့် Y နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်း2Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X နှင့်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Doogee Valencia Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X အကြား Androidsis မြန်နှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုကိုသင်ယူဆောင်လာပါမည်။
Doogee Nova Y 100X, Euro 80 ထက်နည်းသော Quad Core Lollipop ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
သုံးသပ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံသည့် Doogee Nova Y 100X၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Android terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ ၈၀ ထက်နည်းသောငွေကိုယူနိုင်သည်။
Obi Worldphone သည်သက်တမ်းကြာမြင့်သော Apple CEO တစ် ဦး ၏အလောင်းအစားဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာပြီးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသောစျေးကွက်တွင်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုကိုစတင်မည်။
Motorola သည်ယူရို ၄၀၀ ကုန်ကျသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာအံ့အားသင့်သွားစေရန် Moto X Play မှ gyroscope ကိုမေ့သွားသည်။
Facebook M သည် Mark Zuckerberg ၏ Google Now, Siri နှင့် Cortana တို့၏အဖြေဖြစ်သည်
Facebook သည် Siri နှင့် Google Now တို့ကဲ့သို့ voice assistants များနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှုံးနိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ Messenger တွင်မိတ်ဆက်မည့် M ကိုဖော်ပြသည်။
ကစားရန်အကောင်းဆုံး Android စမတ်ဖုန်းများ
အကယ်၍ သင်သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှဂိမ်းများကိုစိတ်ထက်သန်နေလျှင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကစားရန်အကောင်းဆုံး Android စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ပေးသည်
YouTube Gaming သည်ယနေ့ခရီးစတင်သည်
YouTube Gaming သည်ဂူးဂဲလ်၏ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်ခေတ်မှီအွန်လိုင်း streaming ၀ န်ဆောင်မှုကို Twitch နှင့်ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့စေခြင်းဖြစ်သည်။
Doogee သည် Doogee X5 Pro ကိုတင်ပြသည်
Doogee X5 Pro Doogee terminal အသစ်အကြောင်းပြောရန်အာရှနိုင်ငံများမှဆိပ်ကမ်းများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
Nexus5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များကိုယခုအချိန်အထိသိရှိခြင်းထက်စစ်ထုတ်ထားသည်
Google Nexus5ကိုအောက်တိုဘာလတွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး Android 6.0 Marshmallow အသစ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူလာမည်။
Solid Electrolyte နည်းပညာအသစ်သည်ဘက္ထရီများကိုတစ်သက်တာလုံးရေရှည်ခံစေနိုင်သည်
ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းနှစ်မျိုးကို WileyFox နှင့်အတူ Cyanogen Partners
Cyanogen သည် WilleyFox နှင့် ပူးပေါင်း၍ hardware ပိုင်းကောင်းမွန်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာသောအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းနှစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်မည်။
Link Bubble သည်နောက်ကွယ်မှ floating bubble များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်မကြာသေးမီအချိန်များ၌အံ့အားသင့်စေသည့် apps များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်ကို Vysor ဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် Mac တွင်ထင်ဟပ်ပြသပါ
သင်၏ကွန်ပျူတာမှ Vysor ဟုခေါ်သော Koush ဖန်တီးထားသောဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုထင်ဟပ်ပြနိုင်သည်
ဂူဂဲလ်ပလေးမှ Cortana အသံလက်ထောက်အများပိုင်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ ဆက်၍ လုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး Play Store မှ beta ပရိုဂရမ်မှတဆင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Cortana ၏အများပြည်သူ beta ကိုစတင်ထုတ်လုပ်သည်။
Samsung Galaxy Note5တွင်ဒီဇိုင်းအားနည်းချက်ရှိပြီး၎င်းကိုအမြဲတမ်းပျက်စီးစေနိုင်သည်
Samsung Galaxy S5 တွင် S Pen နှင့်ပြaနာရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဥရောပသို့မရောက်မီတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်လိုလိမ့်မည်
Samsung Galaxy Note5နှင့် S6 Edge Plus multitasking ကိစ္စများ
Samsung Galaxy Note5နှင့် S6 Edge Plus တို့တွင် multitasking လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြproblemsနာအသစ်များသည်အလွန်အကျွံရန်လိုသော multitasking ဖြစ်သည်။
တစ်ပတ်အလိုအလျောက်ရှိသည့်ဘက်ထရီများသည်အစစ်အမှန် ဖြစ်၍ မိုဘိုင်းနည်းပညာလောကကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်
ASUS သည်ဘရာဇီးလ်တွင်ထူးခြားသော Zenfone2ဗားရှင်းကို ၂၅၆ GB သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းကိုအခြားစိန်ခေါ်မှုများသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
Android ကိုကြိုက်လား? ဤတွင်သင်စုဆောင်းရန်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရှိသည်
တရားဝင် Android ထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားနေသဖြင့်ဤနေရာတွင်၎င်းတို့အား ၀ ယ်ရန်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်တရား ၀ င်ဈေးအသက်သာဆုံးတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
Xender အက်ပလီကေးရှင်းသစ်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းမှကွန်ပြူတာတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား terminal တစ်ခုသို့ဖိုင်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
OnePlus2သည် Stagefright ကိုပြုပြင်ရန် OTA update ကိုလက်ခံရရှိသည်
OnePlus2သည် Android ရှိ Stagefright တွင်ကြီးမားသောအပေါက်ကိုဖြေရှင်းရန် OTA မှတစ်ဆင့်ပထမဆုံး update ကိုရရှိသည်။
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပေးပြီးနောက်ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသည် Facebook ၏လူမှုကွန်ယက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်အမျိုးမျိုး၏ရုပ်ပုံများကိုတင်ပြလိမ့်မည်။
သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းတွင်သင်အသုံးပြုသောသော့ဖွင့်ခြင်းပုံစံကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူပါသလား။
နော်ဝေကျောင်းသားတစ် ဦး ၏လေ့လာမှုတစ်ခုက Android ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သော့ဖွင့်ခြင်းပုံစံများ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုကိုပြသည်။
သင်၏နောက် Android ဖုန်းတွင်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ
bloatware ကိုဖုန်းအများစုတွင်သူ့ဟာသူထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏ Android terminal အသစ်တွင်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
ဘလက်ဘယ်ရီသည် Android အတွက်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဤ operating system ကိုစံအဖြစ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖန်တီးသည်။ တချို့အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲများပြီးသားလူသိများကြသည်။
Bing Search ကို Microsoft မှ Google Now on Tap ဖြင့်အသစ်ထပ်မံထည့်သွင်းပြီး context-based search ကိုစတင်သည်။
Samsung Galaxy S6 Edge၊ တစ်လလောက်သုံးပြီးတာနဲ့ဒါငါ့အတွေ့အကြုံပါ
Samsung Galaxy S6 Edge ကိုတစ်လကြာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပြီ
[APK] Google Now Launcher ဗားရှင်းအသစ်ကို Android 6.0 Marshmallow မှတိုက်ရိုက်ကူးယူပါ
Google Now Launcher တွင် Android 6.0 Marshmallow developer များအတွက်တတိယအကြိမ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းမှရရှိသောဗားရှင်းအသစ်ရှိသည်။
ASUS မှစမတ်ဖုန်းနှင့် smartwatch ကို IFA 2015 တွင်မိတ်ဆက်မည်
Asus သည်ဘာလင်ရှိ IFA ၏မူဘောင်တွင်လာမည့်စက်တင်ဘာ ၂ ရက်အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Android နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သော BlackBerry စက်ပစ္စည်း၊ BlackBerry Venice ၏ပုံရိပ်အသစ်များပေါက်ကြားလာခြင်းဖြစ်သည်
MIUI7ကိုကမ္ဘာတစ်လွှားသြဂုတ်လ ၂၄ ရက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် beta ROM ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်
Hugo Barra သည် MIUI အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဤထုတ်လုပ်သူကိုများစွာပေးအပ်ခဲ့သောဤကျော်ကြားသောထုံးစံအငူပုံစံ ၇ ကိုတင်ပြရန်တာဝန်ပေးအပ်ခံရသည်။
OnHub, Google Router အဖြစ်လောင်းသည်
အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များရှိသော်လည်း Google သည်၎င်း၏ OnHub router ကိုကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများနှင့်လုံး ၀ ဆက်နွယ်သည်။
ကြိုတင်မှာယူမှုအတွက်ရရှိနိုင်သော Blackphone2ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချိမည်
စက်တင်ဘာလမှာ Blackphone2အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည့်လဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံရေးနှင့် privacy အတွက်ထောက်ခံသည့် terminal ဖြစ်သည်။
Fossil သည်၎င်း၏ Android Wear စမတ်နာရီကို Intel ချစ်ပ်ဖြင့်ပြသခဲ့သည်
Apparel အမှတ်တံဆိပ် Fossil သည်၎င်း၏ပထမဆုံး Android Wear စမတ်နာရီကိုပြသရန် Intel ၏ developer conference ကိုအသုံးပြုသည်။
ဆမ်ဆောင်းက IFA 2015 - စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ကိုခန့်အပ်ရန်အတည်ပြုလိုက်သည်
IFA 2015 မှာနည်းနေပြီဆိုတော့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက Samsung လိုပဲစာနယ်ဇင်းတွေကိုစပြီးခေါ်လာကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ Project Ara ဆိပ်ကမ်းအချို့မဖွင့်ခင်မကြာခင်ရောက်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ စောင့်နေရ ဦး မယ်။
အောက်ပါ Nexus ထုတ်ကုန်များသည် Android M Developer Preview3download ကိုရယူနိုင်သည်။ Nexus 5, Nexus 6, Nexus9နှင့် Nexus Player
Google messaging ၀ န်ဆောင်မှု Hangouts တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအဆက်အသွယ်များနှင့်စကားပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်လိုက်နာရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုရှိသည်။
Android 6.0 Marshmallow သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
ဒါဟာရောက်ရှိလာခဲ့တယ် Android ဗားရှင်းသစ်ကို Androdi 6.0 Marshmallow ဟုခေါ်တွင်ပြီး Google ကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့သည်။
GooglePlex သည် Android M ၏ရုပ်ထုသစ်အတွက်ပြင်ဆင်သည်
Google ၏ရုံးများသို့မဟုတ် GooglePlex ဟုလည်းလူသိများသော Android M ၏ရုပ်ထုကိုမကြာမီထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
လေ့လာမှုအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ရောင်းရသောဆိပ်ကမ်းများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၅ လက်မထက်ပိုကြီးသည်
လေ့လာမှုတစ်ခုအရဒီ ၂၀၁၅ ရဲ့ ၂ လေးပုံတပုံကာလအတွင်းရောင်းရသောဆိပ်ကမ်းများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၅ လက်မသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။
Xiaomi သည် ၁၂ နာရီအတွင်း Redmi Note 800.000 ၏စီးရေ ၈၀၀,၀၀၀ ရောင်းချခဲ့ပြီးစံချိန်သစ်တင်ခဲ့သည်
၁၂ နာရီအတွင်းမှာပဲ Xiaomi Redmi Note 800.000 ကိုယူနစ် ၈၀၀,၀၀၀ နဲ့ရောင်းလိုက်ပြီ။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စံချိန်အသစ်။
Google Nexus5သစ်၏ပထမဆုံးပုံကိုစစ်ထုတ်သည်
ဒီနှစ်အတွက် Google Nexus5အသစ်ရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်ဟာပေါက်ကြားနေပြီ။ သုံးစွဲသူများစွာအတွက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဖုန်း
ZUK သည်၎င်း၏ပွင့်လင်းမြင်သာသောမျက်နှာပြင်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ မည်သည့်စမတ်ဖုန်းတွင်မဆိုနှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခု။
လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်က Samsung Galaxy S6 Edge Plus အသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Edge ၏အမြွှာညီဖြစ်သော်လည်းအရွယ်အစားကြီးသော။
Evernote သည် Evernote Web Interface အသစ်စတင်မိတ်ဆက်သည်
လာမည့်အပတ်တွင် Evernote သည်၎င်း၏လူကြိုက်များသောမှတ်စုရေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှု၏ web interface ကိုအပြည့်အဝ update လုပ်သည်။
Periscope နှင့် Meerkat တို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် YouTube Live Broadcast
Periscope နှင့် Meerkat တို့ကဂူးဂဲလ်သည်တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်းအမျိုးအစားကို ၀ င်လိုသည်။
Yahoo Livetext ကိုလူတိုင်းရနိုင်သည်
Yahoo ၏ Livetext သည်စာသားနှင့်ဗွီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျများမှတစ်ဆင့်အသံမပါပဲဆက်သွယ်နိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မယုံနိုင်စရာသတင်းများဖြစ်သော်လည်း Samsung Galaxy Note5ကိုဥရောပဈေးကွက်တွင် Samsung Galaxy S6 Edge Plus ပေါ်တွင်သာရောင်းချမည်မဟုတ်ပါ။
ဂူးဂဲလ်သည် Android နှင့် Android Wear အက်ပလီကေးရှင်းများကိုပြသရန် Android Experts ကိုစတင်ခဲ့သည်
Android Experiments မှသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွက်ကုဒ်ကိုပင်ယူနိူင်သည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာသွားနိုင်သည်။
သငျသညျယခုဖိတ်စာမပါဘဲ OnePlus2ကိုဝယ်နိုင်သည်
သင်ဖိတ်စာမပါဘဲ OnePlus2ကို ၀ ယ်လိုပါသလား Everbuying မှာကြိုတင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များပါ ၀ င်ပါတယ်။
တွစ်တာမှတိုက်ရိုက်စာအတွက် 140 အက္ခရာကန့်သတ်ချက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
တွစ်တာသည်အက္ခရာ ၁၄၀ ထက် ကျော်လွန်၍ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုအတွက်တံခါးဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အမေဇုံကယူရို ၉၀ တန်တဲ့အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများနဲ့အတူပြိုင်ပွဲကိုပြန်သွားသည်
အမေဇုံကယူအက်စ် ၉၀ တန်သောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဆိတ်သုဉ်းမှုတစ်ခုအဖြစ် Goat Simulator ကိုရှာနိုင်သည်။
LeTV ကုမ္ပဏီသည် ၃ လအတွင်းစမတ်ဖုန်းတစ်သန်းရောင်းချခဲ့ပြီးယနေ့အထိမည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထက်မဆိုသာလွန်သည်။
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ terminal အသစ်ကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထပ်မံအံ့အားသင့်စေသည်။ ၎င်းသည် Elephone M2၊ Elephone ၏ပရီမီယံအများဆုံး terminal ဖြစ်သည်။
အခြားအက်ပ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေစဉ်လျင်မြန်စွာမှတ်စုများကိုဖန်တီးရန်မိုက်ကရိုဆော့ဖ် OneNote ကို "ရေပေါ်ဘား" ဖြင့်မွမ်းမံသည်
OneNote ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည်။ ၎င်းသည်သင်အခြားအက်ပ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေစဉ်အမြန်မှတ်စုတစ်ခုဖန်တီးရန်ရေပေါ်ဘားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
LastPass ဟာအခမဲ့ဖြစ်လာပေမယ့်သင်ဖုန်းကနေတက်ဘလက် (သို့) ကွန်ပြူတာပြောင်းဖို့ငွေပေးရမယ်
LastPass သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးဖုန်းမှတက်ဘလက် / ကွန်ပျူတာသို့သွားလိုလျှင်သင်ငွေပေးချေရမည်။
OnePlus2အခက်အခဲပြagainနာ
OnePlus2ကုမ္ပဏီသည်ပြproblemနာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့သွားသည်။ ယခု US ရှိ terminal ၏ပို့ဆောင်မှုနှောင့်နှေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများသည်တောင်းပန်ခြင်းမှာလူသိများသည်။
Nextbit - Google, Apple နှင့် HTC ၀ န်ထမ်းဟောင်းများမှအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Nextbit သည်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် Google၊ Apple, Amazon နှင့် HTC တို့၏ ၀ န်ထမ်းဟောင်းများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုပြသမည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ယခု Pushbullet သည်အသိပေးချက်များ၊ Universal Copy & Paste နှင့် SMS တို့တွင်အဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်စနစ်အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်
Pushbullet သည် mirroring၊ SMS နှင့် Universal Copy & Paste အကြောင်းကြားချက်များအတွက် end-to-end စာဝှက်ဖြင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ ဗားရှင်းအသစ်သည်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားသည်။
အဘယ်အရာကို YouTube ကိုဂိမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြို?
Live Streaming နှင့် Gaming ဂိမ်းများအတွက်ဟဲဗီးဝိတ်လေးယောက်သည်ယခု မှစ၍ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား YouTube Gaming နှင့် Twitch ဖြစ်ကြသည်။
Vulkan, Google မှဂူဂဲလ်၏ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို Android တွင်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန်
Vulkan သည်ရှုပ်ထွေးသောမြင်ကွင်းများကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် CPU အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Google သည်အက္ခရာစဉ်ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး Sundar Pichai ၏စီအီးအိုကိုခန့်အပ်သည်
ယခုတွင်ဂူဂဲလ်သည် Alphabet ဟုလူသိများသည့်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသောစီမံကိန်းများအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
ထူးခြားသည့် Samsung ဖုန်းသည် AnTuTu တွင် ၉၅,၉၇၂ မှတ်အထိရောက်ရှိသည်။ Snapdragon 95.972 နှင့် Samsung Galaxy S7
ထူးထူးဆန်းဆန်း Samsung ဖုန်းတစ်လုံးသည် AnTuTu တွင်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ Samsung Galaxy S7 လား။
အသစ်ထွက်လာတဲ့ Samsung Galaxy Note5နဲ့ Galaxy Edge + ရဲ့ပုံရိပ်တွေ
Samsung Galaxy Note5နှင့် Galaxy Edge + တို့၏ဒီဇိုင်းကိုပြသသည့်ပုံရိပ်အသစ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်
[APK] ယခုအခါ Hangouts 4.0 ကို Material Design သို့သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာရရှိနိုင်ပါသည်
Hangouts ၄.၀ နှင့်ကုန်ကြမ်းဒီဇိုင်းပါ ၀ င်ပြီးအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောသတင်းများကိုယခုရရှိနိုင်သည်။ ချက်ချင်းကြိုးစားရန် APK ကို Download လုပ်ပါ။
Joaquim Vergèsသည် Android app ကိုတိုးတက်စေရန် Twitter အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
တွစ်တာသည်၎င်း၏လူကြိုက်များသောလူမှုကွန်ယက်တွင်အကောင်းဆုံး third-party app developer များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အတွင်းပိုင်းယိုစိမ့်မှုက Samsung Galaxy S7: Snapdragon 820 နှင့် Android M တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများကိုပြသသည်
Samsung Galaxy S7 တွင် Snapdragon 820 SoC ဖြင့်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေသည်
WhatsApp မှဓာတ်ပုံတစ်ခုဖွင့်သောအခါသင်၏မိုဘိုင်းလ်ချိတ်ဆွဲထားသလား။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်
WhatsApp တွင်အကျော်ကြားဆုံးပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပါသည်။ ဤလှည့်ကွက်များဖြင့်အက်ပ်မှဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါမိုဘိုင်းဖုန်းကိုချိတ်ဆွဲခြင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်။
Blackberry Passport အသစ်မှာ Android ကိုသုံးတယ်
Blackberry ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Android ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟူသောကောလာဟလများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့ Nokia N1 တက်ဘလက်ဟာဥရောပကိုရောက်လာပြီ
နောက်ဆုံးတော့ဥရောပမှာ Nokia N1 ကို ၀ ယ်လိုက်ပါပြီ။ Nokia tablet သစ်မှာ ၃၁၄ ယူရိုနှင့် ၂၀ ယူရိုကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းစတိုးတစ်ခုသည် Galaxy Note5နှင့် S6 Edge + ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာအားလုံးကိုစစ်ထုတ်သည်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှရောင်းချသောအွန်လိုင်းစတိုး Jarir သည်ကြော်ငြာများကိုပြသခဲ့သည်။
HD နှင့် 3D စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလား။ VKWorld Discovery S1 ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
VKWorld Discovery S1 ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ် terminal high-screen မျက်နှာပြင်ပါသည့် terminal နှင့် 3D နှင့်မျက်မှန်မရှိဘဲ။
Doogee သည် Doogee Y100 Plus ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Doogee သည် Doogee Y100 Plus မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်နှင့်ဘက်ထရီပိုမိုများပြားသောကြောင့် Y100 device ကိုတိုးတက်စေသည့် terminal တစ်ခု
Wii M သို့မဟုတ် Android နှင့်အတူ Nintendo မိုဘိုင်းကဘာလဲ
Nintendo ပရိတ်သတ်များက Android ဖုန်းတစ်လုံးကိုတစ်နေ့တွင်စတင်မိတ်ဆက်ရန်ကုမ္ပဏီကိုအိပ်မက်မက်နေသည်။ ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ Wii M၊ မိုဘိုင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာမင်းတို့ပြလိုက်ပါတယ်။
iOS9၏ဗားရှင်းသစ်ဟု ယုံကြည်၍ Android ပန်ဘွိုင်များအားလှည့်စားသည်
ဒီဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Apple fanboys တွေဟာ Android Lollipop ကသူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသော iOS ကိုထိခိုက်နစ်နာစေသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအံ့အားသင့်မိပါလိမ့်မည်။
YouTube Maps Explorer သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုတင်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း
YouTube Maps Explorer သည်မြေပုံ၏မည်သည့်နေရာမှမဆို YouTube ပေါ်တွင်တင်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးသောဝက်ဘ် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Xiaomi သည် ၂၀၁၆ တွင်ရောက်ရှိမည့်ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာများကိုပြင်ဆင်သည်
Xiaomi သည်လာမည့် နှစ်မှစ၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာများကိုထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤ SoC အသစ်များသယ်ဆောင်မည့်ပထမဆုံးဆိပ်ကမ်းများသည် Redmi အကွာအဝေးရှိလိမ့်မည်။
သင်စျေးပေါသော Samsung Galaxy S6 Edge ကိုဝယ်ချင်ပါသလား။ အခုတော့ယူရို ၆၉၉ ကျသင့်တယ်
သင်စျေးပေါသော Galaxy s6 Edge ကိုယခု ၀ ယ်လိုပါကသင်၏အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ Samsung သည် Galaxy S6 Edge ၏စျေးနှုန်းကိုယူရို ၁၅၀ လျှော့ချပြီးယခုအခါယူရို ၆၉၉ ကုန်ကျသည်။
ZTE Blade V6 ကိုတရားဝင်တင်ဆက်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ ZTE ကစပိန်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးစတင်မိတ်ဆက်မည့် ZTE Blade V6 ကိုထပ်မံဖြန့်ချိမည်။
Xperia C5 Ultra အသစ်နှင့် Xperia M5 အသစ်များကိုသူတို့မတင်ပြမီစစ်ထုတ်သည်
Sony ၏ Terminal အသစ်နှစ်ခုဖြစ်သော Xperia C5 Ultra နှင့် Xperia M5 တို့သည်သူတို့၏တင်ဆက်မှုမတိုင်မီနာရီများအတွင်းပေါက်ကြားခဲ့သည်။
WhatsApp တွင် Valencian paella ၏စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပါဝင်သည်
မကြာမီ WhatsApp တွင်ဒဏ္myာရီဆန်သောဗလင်စီယာ paella ကိုကိုယ်စားပြုသော emojis အသစ် ၁၅ လုံးပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသူ၏တောင်းဆိုမှုများကြောင့်၎င်းတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့်ဘာသာစကား (၂၆) ခုရှိသည်
ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်ကိုပိုမိုသောဘာသာစကားများဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်။ Mountain View မှဤ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဘာသာစကား ၂၆ ခုရှိသည်။
OnePlus 2,“ အထင်ကရလူသတ်သမား” သစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
OnePlus2ဟာသူ့ရဲ့အသစ်အဆန်းတွေအားလုံးနဲ့အတူတင်ပြပြီးပါပြီ။ ဒီဆောင်းပါးမှာသူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုဆန်းစစ်သွားမှာပါ။
#Paellaemoji သို့မဟုတ် Valencian Paella သည် WhatsApp ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပုံကို
ထည့်သွင်းရမည့်စိတ်ခံစားမှုအသစ်များစာရင်းတွင် WhatsApp ရှိ Valencian Paella ၏ပါဝင်မှုကိုယခုပင်ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။
Play Store မှ developer များအနေဖြင့် beta options ကို Google ကတိုးတက်အောင်လုပ်သည်
Play Store မှသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုစမ်းသပ်နိုင်စေရန်ဂူးဂဲလ်က developer များအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာပေးသည်။
Sony ၏ 'Concept for Android' ROM ကို Xperia Z3 တွင်ကူးယူပါ
XDA မှ“ ROM သည် Android အတွက် Concept” ပါရှိသည့်၎င်း၏ terminal များအတွက် Sony အသစ်ကိုသယ်ဆောင်လာသည့်၎င်း ROM သည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
LG G Flex3ကိုမတ်လတွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး Snapdragon 820 ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
LG G Flex3၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအားလုံးသည်မတ်လတွင်တင်ဆက်မည့် LG ၏ကွေးသော terminal အသစ်ကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
Moto G3 VS Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
အောက်ပိုင်းအလယ်အလတ်တန်းစား Android အုပ်ချုပ်မှုအတွက် Moto G3 VS Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro တို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဘယ်သူစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရမှာလဲ။
Android တွင်အားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုကိုဗွီဒီယိုများမှတစ်ဆင့်အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် MKV format ဖြင့်သက်ဝင်စေပြီး၎င်းသည်ထုတ်ကုန်များ၏ထက်ဝက်ကိုထိခိုက်သည်။
Moto G 2015 သုံးသပ်ချက် - ဒီနှစ်မှာအကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်စရာ
ဤ Moto G 2015 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၌ဤ Motorola terminal အသစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးကိုအခြားသူများထံသင်ကြားပေးပါသည်
ဒီပြန်ဆိုချက်တွေက Samsung Galaxy Note5ရဲ့ဒီဇိုင်းကဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာပြသထားတယ်
လာမည့်သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင် Samsung Galaxy Note 13 ကို Samsung မှတင်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ Note မိသားစုဝင်သစ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့ရုပ်ပုံအသစ်များယူဆောင်လာသည်။ ။
Hangouts 4.0 ကိုနောက်ကျသော်လည်းနောက်အကြောင်းပြချက်ကောင်းရှိပါသည်
ယနေ့ခေတ်လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း Android Wear အသုံးပြုသူများသည် Hangouts 4.0 မှများစွာအကျိုးခံစားရမည်။
WhatsApp ၏သမိုင်း: မူလအစ, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အောင်မြင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန် messaging application ဖြစ်သော WhatsApp ၏အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။ Android မတိုင်မီကပင် Facebook သို့ရောင်းချခြင်းနှင့်အနာဂတ်တိုးတက်မှုများမှစတင်သည်။
Yahoo က Livetext, messaging app အသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်။ အသံမပါဘဲစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဗီဒီယိုကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်
Yahoo Livetext ဖြင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်စာသား၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အသံမရှိဘဲစကားပြောဆိုမှုများသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Samsung က Galaxy S6 နဲ့ S6 အစွန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်
ရောင်းအားတွင်အနည်းငယ်အပြုသဘောဆောင်သောကိန်းဂဏန်းများကြောင့် Samsung သည် Galaxy S6 နှင့် S6 edge တို့၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ Unpacked ပွဲမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်ကဂဏန်းအနည်းငယ်။
New Nexus5၏နောက်ကျောကိုစစ်ထုတ်သည်
ကောလဟာလများနှင့်ယိုစိမ့်မှုများမှအစပြုပြီးပြီဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Nexus5၏နောက်ကျောကို OnLeaks ကပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Qualcomm ၏ Wipower သည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာကိုသတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်
သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုပေါင်းစပ်ထားသောစမတ်ဖုန်းများ၏ပြproblemsနာတစ်ခုမှာ ၄ င်းတို့သည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ကိုမသုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့၏သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများသည်အပူလွန်ကဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ယခုအချိန်အထိဤစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကံကောင်းတာက Qualcomm ဟာသူ့ရဲ့ WiPower နဲ့အတူရောက်ရှိလာပါပြီ။
Sony ကမတ်လမှာ Xperia Z5 + ကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့တယ်
ကောလဟာလအသစ်များအရဆိုနီသည်မတ်လတွင် Xperia Z5 + ကိုတင်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောထူးခြားချက်များကိုထင်ရှားစေမည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ - ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Android မှာနေရာလွတ်ဘယ်လိုရနိုင်လဲ
Android မှာနေရာလွတ်ချဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုရှင်းပြထားတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏စမတ်ဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Moto X Play နှင့် Samsung Galaxy S6
Moto X Play နှင့် Samsung Galaxy S6 တို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်နည်း။
Cube I7 Remix OS - ၂ ပတ်ကြာအောင်တက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါတွေဟာကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပဲ
Tablet Cube I7 Remix OS ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ရင်းမှန်ဆုံးထင်မြင်ချက်များဖြစ်သည်။
Moto G 2015 နှင့် Moto G 2014 တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အနိုင်ရသူသည်အကောင်းဆုံးလောင်းကစားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
DxOMark စံသတ်မှတ်ချက်အရ Moto X Style ကိုကင်မရာ၏တတိယအကောင်းဆုံးဖုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အတော်လေးတစ် feat ။
Doogee Valencia2နှင့် 100 Pro ။ Doogee ၏အနိမ့်ဆုံး Android အတွက်လျှို့ဝှက်လက်နက်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပြီး Doogee Valencia2Y 100 Pro အသစ်တစ်ခုဖြစ်သောအလယ်အလတ်တန်းစား Android ဖုန်းတွင်ဆင်းသက်လာသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
OnePlus2ကိုဝယ်ရန်ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုရရန်
သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်သောအခါ OnePlus2ကို ၀ ယ်ရန်ဖိတ်ကြားမှုမည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
YouTube သည်လိုင်းတစ်ခုကိုတင်ရန်၊ မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဖန်တီးရန်အတွက် Google+ အသုံးပြုသူကိုတောင်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ပထမဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာဂူဂဲလ် + တွင်မပေါ်ဘဲ YouTube ပေါ်မှမှတ်ချက်များထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ လာမည့်လအနည်းငယ်အတွက် Google+ ကိုသင်တောင်မလိုအပ်ပါ
Samsung က Galaxy Note 13 နှင့် S5 Edge Plus တို့နှင့်အတူသြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Unpacked ဖြစ်ရပ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် Samsung ၏ Unpacked ပွဲ၌ Samsung Galaxy Note 13 နှင့် Galaxy S5 Edge plus တို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
၎င်းသည် Samsung Galaxy Note5၏ S-Pen ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Note5၏ S-Pen သည်တောင်ကိုရီးယားကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၏တက်ဘလက်များတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တည်ဆောက်ထားသည့်ပစ္စည်းအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။
စပိန်ဘာသာဖြင့် Yi Action Camera ၏ Xiaomi၊ GoPro Hero3မှယူရို ၁၀၀ အောက်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ယူရို ၁၀၀ အောက်သာရနိုင်သည့် GoPro Hero3နှင့်ဆင်တူသည့်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များရှိသည့် Xiaomi Yi Action Camera၊ လှုပ်ရှားမှုကင်မရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အားကစားကင်မရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းယူဆောင်လာပါမည်။
မျှဝေဖို့ပိုလွယ်ကူစေရန် Instagram ကဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်သည်
ပုံရိပ်ရွေးချယ်သူအသစ်သည်လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ယက်မှဓာတ်ပုံများကိုလွယ်ကူစွာမျှဝေရန် Instagram စမ်းသပ်မှုအသစ်ဖြစ်သည်။
Fallout Shelter ကို Android တွင်သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်မည်
သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်ကို Bethesda စတူဒီယိုမှ Android နှင့်ဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်ရန်သူများနှင့်အတူ Fallout Shelter ကို Android အတွက်စတင်ရောင်းချမည့်နေ့ဖြစ်သည်။
Cube I7 CX RemixOS တက်ဘလက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ သင့်ကိုယူရို ၂၀၀ ထက်မပိုသော Android tablet plus keyboard
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Android7Kit Kat နှင့် Cube CDK4.4.4 သံလိုက်ကီးဘုတ်တို့ပါ ၀ င်သည့် Cube I01 CX RemixOs တက်ဘလက်၏သုံးသပ်ချက်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုယူရို ၂၀၀ ထက်နည်းသောထူးခြားသောအစုံဖြစ်သည်။
သုံးသပ်မှု Ulefone Be Touch2သည် Octa Core တစ်ခုလုံးနှင့် 3Gb RAM တစ်ခုလုံးကိုယူရို ၁၇၀ အောက်သာပေးသည်
ဒီနေ့မှာသင့်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Ulefone Be Touch2ကိုအပြီးသတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အနိမ့်ဆုံး Android စျေးနှုန်းဖြင့် high-end အင်္ဂါရပ်များပါသော Android terminal ကိုယူဆောင်လာသည်။
ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်သည့်စမတ်ဖုန်း Samsung Galaxy S6 အစွန်းကိုဆန်းစစ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အစွမ်းထက်ဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Samsung Galaxy S6 အစွန်းအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကထုတ်ခဲ့သော S series များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
Honda ၏ပထမဆုံးကားကို Android Auto ဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်
2016 Honda Accord သည် Android Auto အသုံးပြု၍ ပထမဆုံးသောကားကိုဤကားထုတ်လုပ်သူမှလမ်းသို့ပို့ဆောင်သည်။
အထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ (သို့) youtubers များအတွက် YouTube ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
YouTube သည် tab အသစ်သုံးခုနှင့်ဗွီဒီယိုများတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ကိရိယာများစွာရောက်ရှိခြင်းကိုအလေးပေးသောဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိသည်။
Samsung Galaxy Note5၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
Samsung Galaxy Note5နှင့် Galaxy S6 edge + ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်ကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။
Hearthstone ၏“ Grand Tournament” တိုးချဲ့မှုကိုသြဂုတ်လတွင်ရောက်ရှိမည်
Blizzard သည်arthဂုတ်လတွင် Hearthstone အတွက်တိုးချဲ့မည့် The Great Tournament အသစ်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်
Android အတွက် Sony Concept - Android အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်သန့်ရှင်းသော Android
Sony မှ Xperia Z3 နှင့် Sony မှ 'Android အတွက် Concept for' အသစ်နှင့်အတူသင့်ကို Android စင်ကြယ်စွာစောင့်ကြိုနေမည်။
Google က FAB ခလုတ်ကိုဖြတ်ပြီး Google Keep မှာရှိတဲ့ shortcut bar ကိုပြောင်းလိုက်တယ်
Keep note -aking app တွင် Google သည် Android Lollipop နှင့်အတူ FAB ခလုတ်ကိုလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သောဘားဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။
Doogee F3: သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
Doogee F3 အသစ်ကိုသင်ရှာဖွေချင်ပါသလား။ ဒီနေ့မှာသင်ဟာ Doogee စမတ်ဖုန်းအသစ်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ရနိုင်မှုနှင့်စျေးနှုန်းကိုသင့်ကိုယူဆောင်လာပါပြီ
Android 5.1.1 Lollipop update ကို Sony Xperia Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 နှင့် Z2 Tablet များတွင်တွေ့ရသည်။
Android 5.1.1 သည် Xperia Z အကွာအဝေးရှိ Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 နှင့် Z2 Tablet များရှိအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များအတွက်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
[APK] ဒေါင်လိုက်ဗွီဒီယိုများကို YouTube တွင်မှန်ကန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သည်
Android ပေါ်ရှိ YouTube ဗားရှင်းအသစ်ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ထိုသူရဲကောင်းဒေါင်လိုက်ဗွီဒီယိုများကိုကောင်းမွန်စွာဖွင့်နိုင်သည်။
Google Maps 9.2 သည်သင်ကြည့်ရှုခဲ့သောနေရာများ၏သက္ကရာဇ်စဉ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်
SNK ၏ဂန္ထဝင် ၁၁ မျိုးနှင့်ယူရို ၀.၉၉ ဖြင့်နွေရာသီရောင်းမည်
SNK တွင် Play Store ၌ဂန္ထဝင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများစွာရှိပြီးနွေရာသီတွင်ယူရို ၀.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်
Adobe Lightroom ကိုဗားရှင်း ၂.၁ သို့ကူးယူချိန်ညှိချက်များ၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်သော interface နှင့်အခြားအရာများဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
ထူးခြားထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ် ၃ ခုအပြင် ၂.၁ ဗားရှင်း Adobe Lightroom တွင် bug fixes များစွာပါ ၀ င်သည်။
ဂူဂဲလ် + ဓာတ်ပုံများသည်ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသို့ပြောင်းရန်အချိန်သြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်ပိတ်သည်
ဂူဂယ်လ် + ဓာတ်ပုံများသည်ဂူဂဲလ်၏လွတ်လပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုအတွက်သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုဂရုစိုက်မည့်သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ပိတ်လိုက်သည်။
Telegram ဗားရှင်းသစ်သည်စကားပြောခန်းအတွင်းရှိ YouTube, Vimeo နှင့် SoundCloud ကစားသမားများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်
Telegram တွင်ဗွီဒီယိုအသစ်၏အဓိကအသစ်အဆန်းအဖြစ်စကားဝိုင်းအတွင်း YouTube, Vimeo နှင့် Soundcloud ကစားသမားများပါ ၀ င်သည်။
Android မှာ voice assistant Cortana နဲ့အတူရှိတယ်
Cortana သည် Windows 10 voice assistant ဖြစ်ပြီး Android အတွက် beta တွင်ပါရှိပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
Samsung က Galaxy Tab S2 8.0 နှင့် Galaxy Tab S2 9.7 ကိုကြေငြာခဲ့သည်
ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ Samsung သည်လာမည့်လတွင် Galaxy Tab S2 8.0 နှင့် Galaxy Tab S2 9.7 နှင့်အတူတက်ဘလက်အသစ်နှစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ပိုမိုလွယ်ကူသည့်နည်းဖြင့်အီးမေးလ်များကိုနှောင့်နှေးနေခြင်းသည် Inbox တွင်အသစ်ဖြစ်သည်
Inbox သည်အီးမေးလ်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွှေ့ဆိုင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ အရေးပါမှု၏သေးငယ်တဲ့အသေးစိတျ။
Plex သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်သင်၏ Smart TV ပေါ်တွင်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကား Media Markt Mobile Mania မြှင့်တင်ရေး၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများဖြစ်ကြသည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်တွင်အဆုံးသတ်မည့် Media Markt မှ Mobile Mania မှအကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါမည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်အတွက် Motorola streaming ဖြစ်ရပ်။ သင်ဘာကိုတင်ပြချင်ပါသလဲ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ 28:2015 pm တွင်လာမည့်ဇူလိုင်လ 15, XNUMX အတွက်အသစ်တစ်ခုကို Motorola streaming ကိုဖြစ်ရပ်၏တရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
Rovio က Angry Birds2ကိုဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်တွင်ကြေငြာမည်
ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်ကို Android တွင် Angry Birds 30 ကိုစတင်ရန် Rovio ရွေးချယ်သောနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ရိုင်းသောငှက်များ။
Android အတွက် Pushbullet သည် SMS စာတိုများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်
Pushbullet သည် Android နှင့် desktop ဗားရှင်းတွင် SMS စာတိုများကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
ခလုတ်မေးခွန်းတစ်ခု - သင်၏ကြော်ငြာအတွက်ဂူဂဲလ်မှအသစ်တစ်ခုနှင့်သင်၏စာမျက်နှာများအတွက်ဖေ့စ်ဘုတ်မှအသစ်တစ်ခု
ဝယ်ယူမှုရလဒ်များတွင်ဂူးဂဲလ်က ၀ ယ်ယူသောခလုတ်ကိုထည့်ပါလိမ့်မည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်လူကြိုက်များသောလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင်တစ်ခုပါရှိသည်။
Evleaks သည် Huawei Nexus ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ၅.၇ လက်မအရွယ် QuadHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,7 ချစ်ပ်နှင့်သတ္တုကိုယ်ထည်
Huawei သည် ၅.၇ လက်မအရွယ် QuadHD resolution screen နှင့်အတူယခုနှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင် Nexus အသစ်ကိုထုတ်လုပ်နေသည်။
ယနေ့ဇူလိုင် ၁၅ ရက်သည်အမေဇုံပရီမီယံနေ့ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်အရူးအမူးသောစျေးနှုန်းများကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံး Android ထုတ်ကုန်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
Twitter နှင့် ၄ င်း၏စိတ်ပြောင်းလဲမှုကို third-party developer များပြောင်းလဲခြင်း
တွစ်တာဖောက်သည်များဖန်တီးရန်တတိယပါတီ developer များနှင့်တွစ်တာသည်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ အခုသူကသူတို့ကိုနောက်တဖန်အနီးကပ်လိုသည်။
Skype 5.5 သည် chat တွင် login နှင့် link previews များကိုလွယ်ကူစေသည်
Skype ၏ဗားရှင်း ၅.၅ တွင်၎င်းကို log in လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းနှင့် chat တွင်ယခင်လင့်ခ်များမည်သို့ပါ ၀ င်သည်။
Firefox ရှိ Flash ဗားရှင်းအားလုံးကို Mozilla ကပိတ်ဆို့ထားသည်
အသုံးပြုသူများ၏ကွန်ပျူတာများကိုချိုးဖောက်ရန် Hacking Team သည် Flash Player အားနည်းချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Mozilla သည် Firefoz တွင် Flash ကိုဗားရှင်းအသစ်မထွက်မှီတားမြစ်ထားသည်။
Android အတွက် Nokia HERE Maps အများပိုင် beta ကိုထုတ်ဝေသည်
Nokia HERE Maps သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကို Android သုံးစွဲသူမည်သူမဆိုရယူနိုင်သည့်အများဆိုင် beta ရှိပြီးဖြစ်သည်။
Twitch ကို YouTube နဲ့ဆင်တူတဲ့ floating window player နဲ့အတူ update လုပ်တယ်
သင့်ဖုန်းတွင်အခြားအရာတစ်ခုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အတူ Twitch ရှိရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်အတူ floating window တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။
သင်၏ Google မှသင်၏မြေပုံသို့ Google Maps လိပ်စာများကိုပို့နိုင်သည်
Google Maps desktop version တွင်ရှာဖွေထားသောလိပ်စာကိုသင်၏ Android စက်သို့ယခုပို့နိုင်သည်
သင်၏ဓါတ်ပုံများကို စုစည်း၍ tag ပြုလုပ်ရန်အတွက် United States ပြင်ပမှ Google ဓါတ်ပုံများတွင်ဤကိရိယာကိုမည်သို့ enable လုပ်ရမည်ကိုပြသသည်။
Android M Developer Preview2တွင်အသစ်အဆန်းများ
Android M Developer Preview2ကိုဂူဂဲလ်မှစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ပြောပြမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များစွာပါ ၀ င်သည်။
Geeksphone ဟာသူ့ရဲ့မိတ်ဖက်အတော်များများအတွက် geeks နဲ့အတူတံခါးဖွင့်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများသည် Silent Circle's Blackphone နှင့်အတူ။
Google Messenger ၁.၄ တွင်တည်နေရာပေးပို့ခြင်း၊ စတစ်ကာများနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်
Google Messenger တွင်ဗားရှင်းအသစ် ၁.၄ ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်တည်နေရာပေးပို့ခြင်း၊ စတစ်ကာများနှင့် scroll bar တို့ကိုစကားဝိုင်းများတွင်ဖော်ပြသည်။
ရုရှားအစိုးရသည် Selfies ကိုမည်သို့ယူရမည်ကိုပြသရန်လမ်းညွှန်တစ်ခုထုတ်ဝေသည်။ ပြီးတော့အဲဒါကဟာသမဟုတ်ဘူး
ရုရှားပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုရိုက်ကူးရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြသည့်ရုပ်ပုံများကိုပြသခဲ့သည်။
Action Launcher သည်စိတ်ကူးတစ်ခုအနေဖြင့် Custom quick bar အသစ်နှင့် 3.5 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
Action Launcher ကို Quickbar သို့မဟုတ် Custom bar ကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်းအသစ်တစ်ခုဖြင့်သင်သို့မဟုတ် Facebook သို့မဟုတ် Twitter သို့ဖြတ်လမ်းများထည့်သွင်းနိုင်သည့် update ကိုပြုလုပ်သည်။
Google Play စတိုးကိုအမြင်အာရုံတိုးတက်မှုများဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်